မီလျံနာ U.S ကမ္ဘာပတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » မီလျံနာ U.S ကမ္ဘာပတ်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 28, 2013 in Money & Finance, U.S. News |5comments
အမေရိကန် နိုင်ငံရေးစနစ် ပျက်ယွင်းကောင်း ပျက်ယွင်းနေပေမဲ့ သူကြွယ်အသစ် မွေးထုတ်ပေးရာမှာ ကမ္ဘာကို ဆက်လက် ဦးဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
အသစ်ထုတ်ပြန်သော ခရက်ဒစ်ဆွိစ် အစီရင်ခံစာက လွန်ခဲ့သည့်နှစ် နောက်တိုး မီလျံနာ ၁.၈သန်း စာရင်းတွင် ၁.၇သန်းမှာ ယူအက်စ်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အမေရိကန် မီလျံနာ ၁၃.၂သန်း ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မြင့်တက်လာသော စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်၊ အိမ်မြေခြံဈေး ပြန်ဦးမော့လာမှုနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် တိုးပွားလျက်ရှိသော ပစ္စည်း ဥစ္စာတန်ဖိုးများကြောင့် သူကြွယ်အရေအတွက် တဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာသည်။
အံ့အားသင့်ဖွယ်အဖြစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ မီလျံနာ သန်းကြွယ်သူဌေး မွေးဖွားမှုနှုန်းတွင် ၂၈၇ ၀၀၀ဖြင့် ဒုတိယလိုက်သည်။ သူ့နောက်တွင် ဂျာမနီ ၂၂၁ ၀၀၀၊ အီတလီ ၁၂၇ ၀၀၀၊ ဗြိတန် ၁၁၇ ၀၀၀ တို့လိုက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက လွန်ခဲ့သော ၁၂လအတွင်း မီလျံနာ ကိုသောင်းမျှသာ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ (နဲသွားမှာပေါ့၊ မြစ်ဆုံရေကာတာ၊ ဝမ်ပေါင်ကြေးနီတောင် စီမံကိန်းတွေ ရပ်ထားရဒယ်၊ ဖားကန့်က ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေလဲ နားသွားပြီ၊ ရိုးမတောတွေလည်း ကုန်ပြီဆိုဒေါ့… ကြေးမုံဂျီးရေ အောင်ဖျာလိပ် ပေသီးထမ်းပြီး ပြန်ဗေဒေါ့.. မျံမြံ)
အထိအနာဆုံးမှာ ဂျပန်ဖြစ်ပြီး မီလျံနာ တသန်းကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အနည်းဆုံး နှစ် ၃၀အတွင်း ကမ္ဘာ့မီလျံနာဦးရေမှ ဂျပန်၏ဝေစု ၁၀%အောက် လျောကျသွားသည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံက မီလျံနာ ၁၂၀၀၀၊ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံက မီလျံနာ ၅၀၀၀ ဆုံးရှုံးသည်။
ကမ္ဘာ့မီလျံနာ ၃၂သန်းတွင် ၄၂% ယူအက်စ်၊ ၃၉% ဥရောပတွင် နေထိုင်ကြောင်း ၂၀၁၃ ခရက်ဒစ်ဆွိစ် ကမ္ဘာ့ ကြွယ်ဝမှု အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြသည်။
ဓနဥစ္စာများ တနေရာတွင် စုပုံနေ…
ကမ္ဘာ့ကြွယ်ဝမှုသည် ထိပ်ဆုံးပိုင်းတွင် နင်းကန် သွားရောက် စုပုံလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၁% မပြည့်သော်လည်း ၄၁% (သို့) ဒေါ်လာ ၉၈.၇ ထရီလီလျံ (၁ထရီလျံ = ၁၀၀၀ဘီလျံ ) မီလျံနာများ လက်ဝယ်ရှိသည်။ ထိုကိန်းဂဏန်းမှာ ၆၈% (သို့) ၃.၂ ဘီလျံရှိသော အောက်ခြေ လူတန်းစား လက်လုပ်လက်စားများထက် ၁၂ဆ၊ ဒေါ်လာ ၁၀ ၀၀၀ မှ ၁၀၀ ၀၀၀ ပိုင်ဆိုင်မှု တန်ဖိုးရှိ သူများထက် သုံးဆ ပိုများနေကြောင်း ခရက်ဒစ်ဆွိစ်မှ ပြောသည်။
တကမ္ဘာလုံးတွင် ဒေါ်လာငါးသန်းမှ ဆယ်သန်းအကြား ကြွယ်ဝသူ ၂သန်းကျော်ရှိပြီး လူ ၉၈၇၀၀ ဦးမှာ ဒေါ်လာ သန်း၅၀နှင့်အထက် ချမ်းသာပြီး ဒေါ်လာသန်း၁၀၀နှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်သူမှာ ၃၃၉၀၀ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
US created 90% of world’s new millionaires
By Robert Frank | CNBC – Wed, Oct 9, 2013
Japan was the biggest loser, with more than 1 million erased. For the first time in at least 30 years, Japan’s share of the global millionaire pie has fallen to below 10 percent. Brazil lost 12,000 and Argentina 5,000.
The 2013 Credit Suisse Global Wealth Report said that 42 percent of the world’s 32 million millionaires live in the U.S., and 39 percent live in Europe.
It also pointed to the increasingly top-heavy nature of global wealth. Though they represent less than 1 percent of the world’s population, millionaires control 41 percent of its wealth-or $98.7 trillion. That’s more than 13 times as much as the 68 percent (3.2 billion people) on the bottom and three times as much as those with net worth of $10,000 to $100,000, according to Credit Suisse.
တို့ တရုတ်ပီဂျီးရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေ မြင့်တက်လာစေဖို့ ကျနော်တို့ မြန်မှာပီဒူ ပီဒါးတွေမှာ တာဝန်ချိပါဒယ်။
တရုပ်ကျေးဇူးဆပ်မကုန်ပါဘူး ကြောင်ကြောင်.. ဒီတော့ ကြောင့်ကို ကြေးမုံကြီးလက် ဖုတ်လိုဖုတ် ကင်လိုကင် မျိုးတုံးလိုတုံး အပ်ပါမယ်…
ဘယ်အချိန်များ တို့ မြန်မာတွေ အဲဒီထဲ ဝင်မယ်မသိ
ပြောလို့ ရတာတော့ ဟုတ်ဖူးနော့
အဲ့ US က မီလျှံနာတွေထဲ မြန်မာတွေလဲ ပါချင် ပါနေမှာ..
ကျူပ်စီမှာ အင်ဒိုနီးရှားဆယ်သိန်းနဲ့ ညီမျှတဲ့